Senator Mareykan ah oo Somalia ku tilmaamay hoyga argagixisada &…(VIDEO) – SBC
Senator Mareykan ah oo Somalia ku tilmaamay hoyga argagixisada &…(VIDEO)
Senator Mirk Kirk oo ka mid ah golaha Senate-ka Mareykanka ayaa ku tilmaamay Soomaaliya inay tahay hoy argagixiso iyo burcad badeed isla markaana Soomaaliya tahay dalka labaad ee aduunka ugu qatarta badan dhanka argagixisada.
Mirk Kirk wuxuu ku tilmaamay ururka Al-Shabaab inay yihiin xoog aragagixiso isagoo sheegay in ay fuliyeen weeraro kala duwan oo ay ka geysteen Soomaaliya, Kenya iyo Ugandha waxaana uu sheegay in sanadkii 2010-kii bishii July qaraxii ka dhacay magaalada Kampala ee ay ku dhinteen 76-da qof mid ka mid ah uu ahaa Mareykan ka yimid gobolka North Carolina.
Senator Kirk wuxuu ku tilmaanay afduubkii bishii dhaweyd ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee lagu qafaashay shaqaalaha hay’ada DDG ee qof ka mid uu ahaa Mareykan in ay ka dambeeyeen Al-Shabaab isla markaana ninkaasi ay gacanta ku hayaan sida hadalka uu u dhigay, iyadoo la wada ogyahay in afduubkaasi ay geysteen kooxo burcad badeed ah.
Kirk oo ka hadley gulufka dagaal ee Kenya Soomaaliya ku gashay ayuu muujiyey sida uu riyaaqsan yahay gulufka dagaal ee Kenya ay ku gashay gudaha Soomaaliya ee ay sheegtey inay kula dagaalamayso xoogaga Shabaabka.
Senator Kirk wuxuu sheegay in hawlgalka dagaal ee Kenya inay qayb ka yihiin xoogaga maleeshiyaad Soomaali ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin Ahul Sunna Wal-Jameeca (ASWJ), Kooxda Raaskaambooni iyo maleeshiyaadka Jubba Lanad oo uu sheegay inay hoos tagaan wasiirkii hore ee gaashandhiga DKMG Maxamed Cabdi Gaandhi oo uu soo qaatey magaciisa.
Mr Kirk oo laga soo doorto gobolka Illinois oo ah gobolka Shanaad ee ugu dadka badan wadanka Mareykanka isla markaana ah gobolkii uu ka soo galay golaha Senate-ka Madaxweynaha xiligan maamula dalka Mareykanka Barack Obama ayaa wuxuu sheegay in Kenya ay ku mahadsantahay gulufka dagaal ee ka dhanka ah Shabaabka ee ay bilowdey.
Illinois Senator Mirk Kirk wuxuu ugu baaqay gaashaanbuurta NATO in ay ciidamu keento Geeska Afrika taasi oo uu sheegay inay caawin karto gulufka colaadeed ee Kenya ee ka dhan kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida, waxaana uu ugu baaqay beesha caalamka inay taageero siiso Kenya si ay ugu guuleysato dagaalka ay kula jirto Shabaabka.
Mirk Kirk wuxuu ku tilmaamay gulufka dagaal ee Kenya mid araxda ka jabinaya sida uu sheegay kooxaha argagixisada oo ay ku adkaan doonto inay qorsheeyaan sida uu sheegay fulinta ficilo argagixisninimo.
“Al-Shabaab waxay muujinaysay qatar culus oo ka dhan ah amaanka & xasiloonida Kenya tan iyo sanadkii 2009-kii, waxay fuliyeen ilaa 10 weerar oo ay ka fuliyeen gudaha Kenya badda & berriga gaar ahaan xuduuda ku dherersan Kenya iyo Soomaaliya” ayuu hadalkiisa ku yiri Mirk Kirk.
Mirk Kirk wuxuu sheegay in hadii aan Al-Shabaab la iska qaban ay ku faafi doonto wadamo fara badan oo dunida ka tirsan xitaa Mareykanka, isla markaana ay ku saacidayso Al-qaacida dagaalkeeda ka dhanka ah danaha Mareykanka.
“Al-Shabaab waxay kaloo xitaa soo jeedisay hanjabaad Mareykanka, iyagoo asalraacinaya isla markaana qoranaya muwaadiniin Mareykan ah” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Senator Mirk Kirk.
Mirk Kirk waxaa kale uu sheegay in Al-Shabaab ay awood u leedahay ama ay ku caawin karto Al-qaacidada Gacanta Carbeed ee dalka Yemen inay fuliso weeraro ka dhan danaha Mareykanka ama ay ka fuliyaan gudaha Mareykanka.
Senator Mirk Kirk ayaa hadalkan ka jeediyey fadhi uu lahaa golaha Senate-ka Mareykanka, waxaana ninkan oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ee mucaaradka ah ee uu ka tirsanaa madaxweyne Bushkii hore ayaa in mudo ah wuxuu dhaliili jirey siyaasada Mareykanka ee Kenya ku aadan isagoo mudo dhawr jeer ah bixiyey wareysiyo uu kaga soo horjeedo in hub Kenya lagu caawiyo, lamana oga hadalkan taageerada xiligan ujeedada uu ka leeyahay.
Senator Mirk Kirk iyo saaxiibadiisa Jamhuuriga waxaa aad u yar awooda ay leeyihiin inay Senate-ka ka hirgaliyaan fikradaha ay wataan maadama golahaasi ay ku badan yihiin xisbiga Dimuqraadiga ee Madaxweyne Obama ka soo jeedo.
Si aad u daawato hadalada Senator-ka link-ga video-ga hoose riix. HALKAN KA DAAWO VIDEO